Sanbata Diqqaa, Guraandhalaa 13, 2016 Local time: 03:20
WASHINGTON DC— Haleellaa boombii maraatonii Bostoniin dhimma wal qabateen shakkamtoonni barattoota koolejii sadii to'annaa jala ooluu dhaan himannaan irratti dhiyaatee jira. Kaneen keessaa tokko kan umuriin waggaa kudha sagalii Roobeel Filipoos lammii Ameerikaa yoo ta'u haati isaa hidda dhalata Itiyoopiyaa ti.
Abukaatoon ROOBEL Obbo DARAJJEE DAMISEE-s, maddeen-oduu USA-TODAY fi ABCTV ennaa ibsan “maammilli kiyya shakkamtoota haleellaa Boombii sana gargaaruun miti kan inni himatame. Dho’insa Boombii sana duras tahe booda, wanna isaan gargaare hin qabu. Himatamtoota isaan boodaa kana waliin maal hojjetan? - isa jedhu immoo, si’achi Mana-murtiitti qulqulleeffanna” jedhan. gabaasa guutuu armaan gaditti caqasa